uMorkel usondela kwiqembu lo-300 njengoba i-Australia ingaphambili ngo-400
u-Morne Morkel uthathe ama-wicket amathathu kulawa ayisithupha awadingayo kwi-series yakhe yokugcina ukungena kwiqembu lo-300 njengoba ama-Standard Bank Proteas kade elwa osukwini lwesithathu lomdlalo wokuqala we-Sunfoi Test bedlala ne-Australia e-Sahara Stadium Kingsmead.
Kolunye usuku oluncishiswe ukukhanya okubi u-Morkel uthathe u-3/42 kuma-overs angu-13.4 ukufika kuma-wicket angu-297 kwathi u-Keshav Maharaj uthole u-3/93 kuma-overs angu-28 ukumnika ama-wicket ayisishagalombili emdlalweni. u-AB de Villiers uphinde waba nosuku olumatasatasa kuma-slips futhi manje usenqake okuhlanu emdlalweni.
Ophose kahle u-Kagiso Rabada ongaphisananga ngama-runs futhi wahlasela wathola u-2/28 kuma-overs angu-13.
i-wicket yesishagalolunye likhishwe u-Dean Elgar okhiphe ukapteni we-Australia u-Steve Smith kabili kumsebenzi wakhe njengoba i-Australia ifike ku-213/9 ekupheleni komdlalo.
Izivakashi zingaphambili kakhulu futhi bangaphambili ngama-runs angu-402 futhi, njengoba kusele izinsuku ezimbili eziphelele, futhi ukuvumela izinto ezifana nokukhanya okubi kulenkundla, ngathi bakhethekile ukuthi bawunqobe lomdlalo.
Ama-Australians aliqalekahle usuku njengoba u-David Warner no-Cameron Bancroft behlanganise ama-runs angu-56 nge-wicket yokuqala kuma-overs angu-13 kodwa ama-Proteas akwazile ukuthatha ama-wicket amathathu kuwona ownke ama-session, bamisa i-Australia ngokuthola u-3/63 kwi-session yesibili no-3/38 kwi-session yokugcina encishisiwe emuva kokuthi izivakashi basuke ku-122/3 kwi-session yasekuseni.
Ama-runs ka-Bancroft angu-53 (83 balls, 10 fours) uyena kuphela otholem u-50 osukwini futhi kucacise ngomsebenzi omkhulu ohlalele ama-Proteas osukwini lwesine nolwesihlanu.